अख्तियारको सक्रियता साँच्चै कि स्टण्ट ?
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लोकमानसिंह कार्कीको विदाइसँगै चर्चाविहीन थियो । लोकमानले दुरुपयोग गरेको अख्तियारको शक्तिको सही सदुपयोग हुन नसकेको गुनासो सुनिन थालेकोमा केही दिनयतादेखि अख्तियार एक्कासी तातिएको छ । बयान लिने क्रम बढेको छ । छानबिन भएको भनेर प्रचारित छ । निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा अख्तियारको यो कदम राजनीतिक प्रेरित छ कि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न भइरहेको छ ? कि निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न भइरहेको छ ? अहिल्यै केही भन्न सकिन्न । तर अख्तियारले आफ्नो सक्रियता भने बढाएको छ ।...बाँकी
–नारायण अधिकारी २० कात्तिक, चितवन । गत वैशाख २ गते चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट नवलपरासीको जटायु रेस्टुराँमा लगेर प्रकृतिमा छोड्नका लागि खोरमा राखिएका छ वटा गिद्धलाई यही कात्तिक २३ गते प्रकृतिमा छाडिने भएको छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत रामचन्द्र कँडेलका अनुसार, वन विभागका सचिव डा युवकध्वज जिसी, निकुञ्ज विभागका महानिर्देशक मनबहादुर खड्कालगायतको उपस्थितिमा गिद्ध छाडिनेछ । छाड्नुअघि ती गिद्धको अवस्था र स्वास्थ्यको बारेमा अनुसन्धानका लागि नेपाल पक्षी संरक...बाँकी
पूर्व राष्ट्रपतिलाई घर छाड्न १५ दिने म्याद
काठमाडौँ । पूर्व राष्ट्रपति डा. रामबरण यादवलाई अहिले बस्दै आएको घर छाड्न भनिएको छ । आज एक दैनिक पत्रिकामा सूचनामा १५ दिने म्यादसहित घर छाड्न भनिएको छ । राष्ट्रपति कार्यलयले घरभाडा र विजुलीको रकम नबुझाएको भन्दै घर छाड्न सूचना जारी गरिएको हो । पटक–पटक घर खाली गर्न सूचना दिदा पनि घर खाली नगरेको भन्दै घरबेटी रविभक्त विष्टले पत्रिकामा सूचना निनकाले यस्तो बताएका हुन् । मंसिर १ गतेसम्म घर खाली नगरे कानुन अनुसार अगाडि बढ्ने विष्टले निकालेको सूचनामा छ । पूर्व राष्ट्रपति यादव २०७२ साल...बाँकी
भूत मेला मनाउन गंगासागरमा धामीझाँक्रीको घुइँचो
November 05, 2017 Posted by Jhilko.com
१९ कात्तिक, धनुषा । विगतमा झैँ यस वर्ष पनि जनकपुरस्थित गंगासागरमा भूत मेला मनाउन धामीझाँक्री भेला भएका छन् । आज बिहानै जनकपुरधामस्थित गंगासागर तलाउमा धामीझाँक्रीको घुइँचो लागेको छ । धनुषा, महोत्तरी, सिरहा, सप्तरीसहित भारतका विभिन्न स्थानबाट जनकपुरको गंगासागरमा स्नान गरी मन्त्रसिद्ध गर्न धामीझाँक्री आउने गर्छन् । पूर्णिमाको भोलिपल्ट एकाबिहानै गंगासागरमा पहेँलो धोती र सारीमा सजिएका मानिसहरु धामीझाँक्री बन्नका लागि हातमा बेतको छडी घुमाउँदै कर्कश स्वरमा चिच्याउँदै मन्त्रजप गरिरहेका...बाँकी
१९ कात्तिक, कञ्चनपुर । कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–३ जोनापुर बागवजारका दुई परिवारको घर गएराति जंगली हात्तीको बथानले भत्काएको छ । हात्तीको बथानले स्थानीय दीपक हुम्ली र वीरबहादुर चौधरीको घर भत्काएको हो । घरभित्र राखेको अन्न खानुका साथै लगाउने, ओढ्ने विछ्याउने कपडा सबै हात्तीको बथानले च्यातचुत पारेर नोक्सान पु¥याएको छ । घरभित्र सुतेका बासिन्दाले भागेर ज्यान जोगाएका छन् । दीपककी श्रीमतीले हात्तीले घर भत्काउन थालेपछि दुधेबालकसहित खातमुनि लुकेर ज्यान जोगाएको बताए । हात...बाँकी
१७ कात्तिक, काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले कानूनीरुपमा अनुमति प्राप्त व्यक्तिका नाममा रहेका हातहतियार (बन्दुक, पेस्तोल) निर्वाचन अवधिभर कात्तिक मसान्तभित्र अनिवार्यरुपमा बुझाउन सर्वसाधारणसँग अनुरोध गरेको छ । कार्यालयले सुरक्षाको काममा खटिएका सुरक्षाकर्मी तथा कानूनबमोजिम लिन पाउने हतियारबाहेक अन्य कुनै पनि व्यक्तिले कुनै प्रकारका विस्फोटक, रसायनिक, विषालु पदार्थ, लाठी, खुकुरी, बन्दुक पेस्तोलजस्ता हतियार लिएर हिँड्न, प्रदर्शन गर्न वा गराउन पनि पूर्णरुपले निषेध गरेको छ ।&nbs...बाँकी
बाध्यतामा उद्यमी बनेका सुरेन्द्र सिंह
November 01, 2017 Posted by Jhilko.com
सामान्यतः कुनै पनि व्यक्ति सफल व्यवसायी तथा उद्यमी बन्नका लागि एकभन्दा धेरै पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । सफल व्यवसायी एक दिन वा रातमा जन्मदैंन, लामो संघर्षबाट मात्र स्थापित हुन्छ । भनिन्छ, उद्यमी जन्मन्छन, बनाइदैंन । सिर्जनशील, गतिशील, लगनशील, आत्मविश्वासी, राम्रो योजना सफल व्यवसायीका लागि अत्यावश्यक छ । कोही विलक्षण प्रतिभा भएका हुन्छन त कोही सिक्दै अगाडि जान्छन् । सुरेन्दबहादुर सिंह सिक्दै अगाडि बढिरहेका सफल उद्यमी हुन । क्यासिनोबाट काम/ व्यवसायमा हात हालेका उनले धेरै...बाँकी
चौतर्फी दबावपछि खड्का अन्ततः मन्त्रालय तानिए
काठमाडौं । आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्का अन्ततः मन्त्रालय तानिएका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले बर्खास्त गर्दा प्रक्रिया पूरा नगरेको कारण देखाउँदै उनलाई नहटाउन अन्तरिम आदेश दिएपछि आयल निगममा बसेर ब्रम्हलुट गरिरहेका खड्कालाई मन्त्रालय तानी निगमको भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न भएका प्रयासलाई असफल बनाउन खोजेका खड्कालाई सोमबार मन्त्रालयमा हाजीर गराउने निर्णय गरिएको छ । ‘मलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय र आपूर्ति मन्त्रालय नेतृत्वले टार्गेट बनाएको थियो । मन्त्री परिवर्तन भएपछि त्यो टार्गेटमा परिवर्तन भ...बाँकी
शर्माले बदलिदिए विपन्न विद्यार्थीहरुको जीवन
October 31, 2017 Posted by Jhilko.com
‘रेडियोग्राफी तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत राजमहिन भन्छिन् ‘मैले जीवनमै नसोचेको कोर्श गर्न पाएँ, अब जब खोजेर परिवारलाई पनि केही सहयोग गर्छु ।’ विराटनगर/ मोरङ कटहरीकी मालो मुडियारीले २०६६ सालमै एसएलसी पास गरेकी थिइन । साहुको खेतमा हलो जोतेर उनका बुबाले परिवार पाल्दै आएका थिए । आमा पनि श्रीमान्लाई खेतीकै काममा सघाउँथिन् । स्थानीय जनता मा. वि. बाट एलएलसी पास गरे पनि आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण उनको पढाइ अघि बढ्न सकेन । पढ्ने इच्छा हुँदाहुँदै पनि आर्थिक अभावका कारण परिवारमा पढ...बाँकी
October 28, 2017 Posted by Jhilko.com
भारतको आन्द्र प्रदेशमा भएको सडक दुर्घटनामा परी शनिबार कम्तीमा सातजना तीर्थयात्रीको मृत्यु भएको छ । दुर्घटनामा अन्य ६ जना घाइते भएको र केहीको अवस्था गम्भीर रहेको सरकारी अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । रवुलापालेम् अमलापुरम राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने पूर्वी गोदावरी जिल्लाको मोडेकुरु भन्ने ठाउँमा दुर्घटना भएको हो । प्रहरीको टोली उद्धारका लागि घटनास्थलमा पुग्दा यात्रु ट्रकको पांग्रा तलसमेत किचिएको अवस्थामा रहेको प्रहरी अधिकारीको भनाइ छ । “मृत्यु भएका सबैजना महिला रहेका छन् । उनीहरु सबैको घ...बाँकी